Raw Fasoracetam powder (110958-19-5) Vaiti - Phcoker
Raw Fasoracetam powder (110958-19-5) video
Raw Fasoracetam powder isimba guru reNootropic rinowira mukati mechikwata che nootropics chinonzi racetams. Izvo zvinobva kune piracetam, asi kukanganisa kwayo kunowedzera simba kupfuura piracetam. Izvo zvinoreva zvakare kupikisa anti-ameniki kupfuura piracetam, uye inoita senheyo yepamusoro yenheyo inokurudzira. Raw Fasoracetam powder ndeyepamusoro-soro choline inowedzera enhancer uye inowedzera nitric oxide synthase basa mu cerebral cortex.
Product Name Raw Fasoracetam powder
Kemikari Name (5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)-2-pyrrolidone;(5R)-5-(piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one;(5R)-5-piperidin-1-ylcarbonylpyrrolidin-2-one;
muchiso Name Raw Fasoracetam powder
Molecular Wsere 196.248
Birara Point 456.8 ° C pa 760 mmHg
Skukodzera Kuvharira kwayo mumvura ndeye 50mg / ml pa 25 Celsius.
Raw Fasoracetam powder APane Kuvandudzwa kweCognitive Processing uye Memory
mbishi Fasoracetam powder (110958-19-5) Tsanangudzo
Fasoracetam Powder inhengo ye nootropic mu racetam mhuri ye nootropics. Rudzi runosanganisira boka guru rezvikamu zvakasiyana-siyana, zvose zvakashandurwa kubva kumubereki muPiracetam, iyo yakawanikwa muZ1960s
Ikozvino iri kukurudzirwa sechinhu chisingaiti chinogadzirisa utachiona hweHDHD. Zvinyorwa-zvinowanika vanhu zvidzidzo zvepa fasoracetam zvishoma asi zvakanaka, zvichiratidza kuti zvinogona kubata zvakanakira imwe nzira yehuduku hweHDHD. Zvidzidzo zvezvipfuwo uye uchapupu hwehutachiona hunobva kuvashandi hunoratidza kuti hunogonawo kukurudzira chiyeuchidzo, kunatsiridza kurara, kubvisa kuzvidya mwoyo uye kuora mwoyo, uye kuderedza zviratidzo zvekurega zvimwe zvinodhaka.
Fasoracetam powder (110958-19-5) basa?
Hapana humwe uchapupu hunogutsa hwokuti fasoracetam powder inoshanda sei kuvandudza cognition, zvisinei, inofungidzirwa kuenzanisa kugadzirwa uye kusunurwa kwe glutamate, GABA, uye acetylcholine, zvitatu zveeurotransmitter dzinokosha zvikuru dzeuropi.
I-GABA (B) kumusoro-mutemo inokurukurwa muzvibatsiro ndeimwe nzira yekugadzirisa kwehutano hwehutachiona uye hunovhiringidza, asi humwe ruzivo runodiwa kuti unyatsonzwisisa kuti fasoracetam inoshanda sei pamusoro pekurangarira nekugadzirisa
May Kuvandudza Memory uye General Cognition
Itai Kuti Bvisa Kuzvidya Mwoyo uye Kuora Mwoyo
Zvichida Kurapa kweHIV
Itai Kuti Kuderedza Kurega Kubva Kune Zvimwe Zvinodhaka
varumbidzwa Fasoracetam powder (110958-19-5) Dosage
Hapana chimiro chakanyatsorongwa che fasoracetam kuvanhu asi zvakadaro. Uhu hunoratidza kuti hutachiona hunoita hudiki huwandu hunotenderedza 10 - 15 mg nematokisi makuru mu 30 - 50 mg pamushandi katatu pazuva.
Zvikanganiso of Fasoracetam powder (110958-19-5)
Fasoracetam powder inoratidzika yakachengeteka uye inonzwisisika zvakanaka apo inotorwa nekuchengetedzwa nevanhu vane utano.
Zvinonyanya kuzivikanwa nemigumisiro yakafanana yakafanana nedzimwe nhengo dzenotropic mumhuri ye racetam: kuneta uye kupera kwekutsvaira, kusagadzikana kwekudya, uye kusuruvara.
Zvisinei, vamwe vashandisi vanorondedzera kuderedza libido uye kuderedza mashoma kana kutora fasoracetam powder.
Iko hakuna ruzivo runowanikwa pane zvakabatana pakati pe fasoracetam nedzimwe mishonga, asi zvinogona kuita kuti phenibut.